Yeka ukuthi i-backlink auto ingathinta kanjani isayithi lakho SEO?
Kulesi sihloko, ngizokwabelana nawe ngokuhlangenwe nakho kwami ​​kokusebenzisa i-generator backlinks generator. Ama-backlink ngokuzenzakalelayo ngokuvamile umqondo omubi wokukhuthazwa kwebhizinisi lakho le-intanethi elikhangwa yizinjini zokusesha njengomsebenzi we-spammy futhi kungonakalisa idumela lakho lomkhiqizo kanye nesigaba sewebhu.
Kulabo abathengisi be-intanethi abaye basebenzisa enye yalezi zinhlelo ukudala emuva, ngizochaza ezinye zezizathu ezivame kakhulu ukusebenzisa lolu hlobo lwesofthiwe ye-SEO namanje hhayi umbono wakho omuhle kakhulu. Kuyindlela encane yokubona ukwenza injini yokusesha okungabangela izijeziso ezinzima ezivela ezinjini. Isikhathi nemali oyitshalile kulo msebenzi kuzoba ngcono kangcono kumaqhinga enjini yokucinga.
Ama-Backlink asebenza ngokuzenzakalelayo athinta kwi-website SEO
Inhloso eyinhloko ye-backlink ukwakha uxhumano olufanele phakathi kwemithombo emibili yewebhu
Abanikazi bewebhu abaningi, ikakhulukazi labo abasanda kulesi sigaba, abahluleka ukubona ukuthi izinga kanye nokuhambisana kwe-backlink yizici ezimbili ezibaluleke kakhulu zokwakha isixhumanisi. Isofthiwe ye-SEO e-inthanethi ayikwazi ukugxila emkhakheni wekhwalithi nokuhlobana kusukela lezi zombili lezi zici zidinga ingqondo ejwayelekile kanye nokuthintwa komchwepheshe wezochwepheshe. Yingakho ngesikhathi somkhankaso wokwakha isixhumanisi, isikhathi nemizamo kufanele kuhlanganiswe. Kuphela, kulesi simo, umkhankaso wokwakha umxhumanisi ungaba ngcono ekuthuthukiseni indawo yakho yonke futhi ulethe ithrekhi yokudlulisa ikhwalithi kusayithi lakho.
i-Google iqhubeka ngokulwa nokukhiqiza okuzenzakalelayo
Izinjini zokusesha ziyazisa kakhulu ukusebenza kwebhuku bese uzama ukulwa nezindlela ezizenzakalelayo ze-website nokwenza ngcono, ngokuphathelene nabo njengezinga eliphansi ne-spammy.
Kwakukhona isikhathi lapho abanikazi bewebhu benganaki izinga lezixhumanisi zangaphandle ezikhomba ezizindeni zabo. Kwakungenzeka ukuphakamisa isikhundla sekhasi lewebhu ngokuthola ama-backlink ngaphezulu. Kodwa-ke, isimo sihlala singalawulwa, futhi i-Google isungulwe imithetho entsha yokusezingeni. Ngokusho kwabo kuphela izinga eliphezulu elifunyenwe ngemuva kwe-backlink lungathinta kahle isikhundla sewebhu.
Ngakho-ke, umbuzo yingakho sidinga ukutshala isikhathi sethu nemali kwisofthiwe yokuzakhela ngokuzenzakalelayo uma izinjini ziqhubeka zilwa nalezi zinqubo zokwakha izixhumanisi.
Uma isayithi lakho lithola izijeziso ngokusebenzisa isofthiwe yokuzakhela isixhumanisi, kungenzeka kube nzima ukuguqula umonakalo kwisayithi lakho SEO
Kufanele uqaphele ngokucophelela ukhetha isofthiwe isakhiwo sakho sokuxhumanisa njengoba kunezinhlelo eziningi ze-SEO ezikhohlisayo eziphansi kakhulu. Inhloso eyinhloko ukupompa imali yakho. Ngincoma ngokuqinile ukuqasha umyalo we-SEO ochwepheshe noma wenze konke ngokwakho ngesikhathi senqubo yesizukulwane se-juice isixhumanisi. Uma kungenjalo, wonke umsebenzi wakho onzima, ukutshala isikhathi nesikhathi semali kuyoba isikhathi sokuchitha isikhathi. Ngaphezu kwalokho, uyingozi ukuze uthole izinhlawulo kusuka ku-Google ezizoba nzima ukubuyela emuva.
Noma kunjalo, kulabo be-webmasters asebevele basebenzisa lolu hlobo lwesofthiwe yokwakha isixhumanisi, qiniseka ukuthi ungahlola zonke izixhumanisi zakho ezingenayo namawebhusayithi avela kuwo. Ngaphezu kwalokho, yonke inqubo kufanele ilandelwe uchwepheshe we-SEO ochwepheshe ongakunika umbiko wokuxhumanisa noma kunini lapho uyidinga khona Source .